Mareykanka oo saldhigyo cusub ka weeraraya Somalia & Yemen (Xog rasmi ah) – SBC
Mareykanka oo saldhigyo cusub ka weeraraya Somalia & Yemen (Xog rasmi ah)
Dawlada Mareykanka ayaa la sheegay inay qorsheysay saldhigyo cusub oo ay u adeegsan doonto weerarada dhanka xaga cirka ah oo la qorsheynayo in lagu qaado Soomaaliya & Yemen gaar ahaan xoogaga Mareykanku uu ku raad joogo ee ka mid ah Al-Shabaab & Al-Qaacida.
Wargeyska Washington Post ee ka soo baxa magaalada Washington ayaa ka soo xigtey sarkaal hore oo ka mid ahaa ciidamada Mareykanka in xiligan meelaha ugu waa weyn ee ay ka soo muuqanayso qatarta waxa loogu yeero argagixisada ay tahay wadamada Geeska Afrika & gacanka Carabta.
Saldhigyadan cusub ayaa la sheegay inay noqon doonaan Itoobiya, Djibouti & Seychelles iyadoo la sheegay in weeraradaasi oo loo adeegsan doono diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee wax duqeeya ee loo yaqaan MQ-9 Reaper.
Diyaaradahan ayaa waxay ku egtahay masaafada hawlgalkoodu 3600 mile iyadoo saldhigyadan cusub ay ka dhigan tahay in marka ay geystaan hawlgalada ay dib ugu soo laaban doonaan saldhigyadaasi.
Warar dhanka sirdoonka ayaa sheegaya in duqeymaha bartilmaadka ah ee Mareykanku ka gaysanayo Afgaanistan & Pakistan ay ka dhigi karto Al-Qaacida ay u firxato Galbeedka Afrika gaar ahaan bariga.
Saraakiisha Mareykanka ayaa rumaysan in ay jirto khatar isa soo taraysa oo ku aadan xoogaga Shabaabka oo xiriir la leh Al-qaacida , kuwaasi oo gacanta ku haya badi gobolada Koonfureed ee Soomaaliya.
Geestiisana Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali ayaa soo dhaweeyey talaabooyinka dawlada Mareykanku ku xoojinayso weerarada dhanka duqeymaha xaga cirka ah, isagoo u waramayey wargeyska Wall Street Journal xili uu magaalada New York kaga qayb galayey shirweynaha qaramada Midoobay.
“Waxaynu leenahay hal ujeedo oo ah in aynu ka ciribtirno argagixisada marka koowaad Soomaaliya, markaasi ka dibna aduunyada inteeda kale” ayuu yiri Cabdiwali Maxamed Cali.
Wadamada laga sheegay in laga hirgalinayo saldhigyadan cusub ayaa siyaabo kala duwan uga hadley, Itoobiya ayaa si diiran u soo dhaweysay qorshaha saldhiga Mareykanku uga dhisanayo, halka dawlada Seychelles ayaa iyadu sheegtey inay si buuxda u taageerayso in talaabooyinka Mareykanka, balse waxay muujisay in Jasiiradu ay bartilmaameed u noqon doono wax loogu yeeray kooxaha argagixisada.
Hawlgalkan ayaa la sheegay in kooxo quburo dhanka military-ga ah ay saldhigyadaasi ka hagi doonaan diyaaradaha aan duuliye laheyn si ay u geystaan weeraro.
Xadiisul qudsi baa allaah sw kuyiri (alcabdu uriidu shey .an wanaa uriidu shey.an walaa akuunu ilaa maa uriid ) adoonku waxbuu doonayaa anna waxbaan doonayaa doonitaankayga ayaa ahaanaya marka ameerika waa adoomadaas weli mushrikiin caasi ah allaah kitaabkiisa iyo inta doonaysa baa aduunka uharaya.waxaanu dhamaan inta xaqa jecel ridada neceb usheegaynaa in gobolada waqooyi bari waqooyi galbeed dhowaan looga dhawaaqi doono urur cusub oo jihaadi ah lana magacbaxay.(ALSHAREECA).Waa bishaara wanaagsan.wiil walba ookamida gurigiisa ayuu diyaar kuyahay iyadoo ay ku midaysan yihiin dhamaan dadka soomaaliyeed ayku midaysan yihiin taasna waxay ku imanaysaa fadhliga allaah dhalinta qoran waa kumahadsan yihiin madaxda ururku mushakal waa ku mahadsan yihiin masuuliyiinta maamulada uqoran iyo maleeshiyaadka uqoran ee anagana nooshaqeeya alaa nasralaahi qariib taasi waa dhabar jab ku timi cadawga alaah iyo inta u adeegta inaanay helin dhul ay isaga gurmadaan iyo inay helaan jaaniska ay kula dagaalayaan mujaahidiinta alshabaab